Siidaa Maammoo Mazammir Eenyutu Dhaaba? – Kichuu
Magaalaa Gudar! Siidaa Maammoo Mazammir dhaabuuf geerarama! Gootaaf siidaa dhaabuun sirrii dha. Sun dhaloota dhufaa darbaaf seenaa gootummaa teechisuu dha. Garuu siidaa gootaa abbaan arge hin dhaabu. Qaama seeraan aangoo qabutu dhaaba.
Jalqaba gooti utubaa sabaa ti. Gooti gaachana lammii fi biyyaati. Gaafa jiru biyyaaf lubbuu ofii kennee hojjata. Gaafa wareegame ammoo seenaa biyyaati. Kanaafuu murni ykn paartiin tokko ittiin of dhaadhessuu hin danda’u. Paartiin tokkichi seeranis ta’ee aadaan aangoo siidaa gootaa ittiin dhaabu hin qabu. Aangoon kan mootummaati. Mootummaan jiraatuu amannaan seerri kana. Mootummaa haallaan garuu seera alummaatu seera ta’uufi. Akki sun ammoo kanaa achi hin hoofu!
Oromiyaatti siidaalee danuutu ijaarame. Marayyuu mootummaatu dhaabe. Siidaa Taaddasaa Birruu, Siidaa Calanqoo, siidaa Waaqoo Guutuu fi kkf mootummaatu ijaare. Gootota biroofis mootummaan ni dhaaba. Paartiin siidaa dhaabuuf sagantaa qabu mootummaa ta’uuf dorgomuu qaba. Gaafas dhaabuu danda’a. Hagasiif garuu aangoo mootummaa hin qabu. Paartiin Gumaa-baas Calanqotti siiduma mootummaan ijaare jalatti suuraa ka’ee geerare. Madda Walaabuttis siiduma mootummaan ijaare jala dhaabbatee mootummaa komate! Sun mirga isaati. Ammas gaafa mootummaan ijaaree xumuru Siidaa Maammoo jalatti suura ka’uu danda’a. Ijaaruuf garuu mirga hin qabu! Seeratu dhoowwa!
Hundaa olitti siidaa dhaabuun hamilee gaafata. Ilaalcha fi gocha gootummaaf ulfina kennu qabaatuu barbaachisa. Warri akka Oromoon wal-keessa deemee hin hojjanne olola gandummaa dhaadhessu, warri safuu Oromummaa cabsee dhiiga namaa dhibbentaan safaree ilmoo namaa “diqaalaa” jedhee arrabsu, warri safuu fi laguu Oromoo cabsee jecha Oromoon dhagayuullee lagatu afaan guutee dubbatu, warri galata gootaa nyaatee goota hidhaa isaan baase fi alaa isaan galche balleessuuf wayyaanee waliin mala dhayatu, warri kaadiree fi firoota kaadiree hunda biyyaa baasuu sagantaa siyaasaa godhatu, warri rakkoo hardhaa dhiisee haaloo kaleessaaf gumaa baasuu karoorfatu, warri waltajjii hunda “jirtuu fi jirraa” qofaan gegeessu gootummaa eessatti beeka? Ammoo otoo gootummaa hin beekne siidaa gootaa akkamii dhaabu? Waan hin taane!
Gooti tan biyyaati! Siidaa isaas biyyatu ijaara! Biyyi ammoo mootummaan gegeeffamti! Kootii mormituu fi kootii mootummaa wal faana uffatuun hin taatu! Mootummaan seera kabajuu qofa otoo hin taane kabachiisufis dirqama qaba! Kanuma!
Namtittii luqqaatittii kana Kan qabee hidhatu hin jiru moo maal waansaa. Har’a immoo uummanni maallaqaasaan. Siidaa goototaa dhaabuu hin dandahu. Qaama seera beekutu dhaaba malee
Oduu Ajaa’ibaa: Walgahii Bilxiginnaa keessaa icitii miliyxee baate.
Addisu Arega Kitessa fi Taye Dendea Aredo Dhihoo tana wal gahii Bilxiginnaa Adaamaatti adeemsifameratti Tayen akkuma Afaan isaa banuu baratetti Addisuun OBN itti fakkaate walgahii keessatti Addisuu arrabse. Addisuunis hedduu aare yeroo boqonnaa isaanii irrati Addisuun ka’ee Taye kaballaan ijaa isaa keessaa baase. MM Ashagireenis itti fiige addaan baase. Achi booda Ashagireen Addisuun akka waan takka hin dubbane itti murteesse.
Ee magan sitti magan ka ofii walii hin galletu biyya bulchaa?
Anii Sifa Hamid
“Kan Jirutu Gumaa Baasa, Sirna Faashistii Kana Nurraa Kaasaa!!”
Wallee Sirna Eebba Waajjira ABO Godina Arsii Magaalaa Sa’agurree irratti Artiist Zeytuunaa Haajiin Dhiyaate.Oromia News Network – ONN
Gama kamiinuu uummatatuu injifata.! Eeyyeen ni injifannaa
Siidaa MILILIK fii SIIDAAN HAYILASILAASE handhuura oromootaa irratti ijaaramee, sabaaf sab_lammii hunda Kan gammachiisuudhaa? SIIDAAWWAN hedduu Kan naannoo amhaaraa fi tigraay keessattii ijaaramaa jiran Kan Saba hundaa jaalalaan hammataniidhaa???
Suniin hundi qorannoon irratti geggefamee ijaaramaa jiraa.?
Oromoon lafa ofii irratti ,Mana ofii keessattii waan ofii barbaade, goota ofii jaalalaan faarfatee siidaa isaaniif malu, humnaaf qabeenya ofiitiin ijaaruu mirga hin qabnu taanan biyyaaf lafas hin qabdanii nuun jedhaa jiraniitii , biyyaaf lafa keenyaaf qabsaahuun Kan dur caalaa cimee itti fufuun Amma.